Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सुपर कप फुटबल खेलमा चेल्सीलाई पछि पार्दै लिभरपुल विजयी – Emountain TV
एजेन्सी, ३० साउन । सुपर कप फुटबलको उपाधि लिभरपुलले जितेको छ ।
स्थानबुलमा बुधबार राति भएको खेलमा चेल्सीलाई स्तब्ध पार्दै लिभरपुलले उपाधि जितेको हो । निर्धारित तथा थप गरिएको समयमा बराबरी भएपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकरबाट लिइएको हो । पेनाल्टी सुटआउटमा लिभरपुलले चेल्सीलाई ५–४ ले पराजित गरेको हो । चेल्सीका ट्यामी अब्राहमको पेनाल्टी प्रहार लिभरपुलका गोलरक्षक अड्रिएनले रोकेपछि जित निश्चित भएको हो । पेनाल्टी सुटआउट अघि ३६ औँ मिनेटमा ओलिभर जिरउडको गोलबाट चेल्सीले पहिलो हाफमा अग्रता लियो । दोस्रो हाफको तेस्रो मिनेट अर्थात ४८ औँ मिनेटमा साडिओ मानेले लिभरपुलका लागि बराबरी गोल फर्काए । ९० मिनेटको खेलमा १–१ को बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलियो । ९५ औँ मिनेटमा मानेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै लिभरपुललाई अग्रता दिलाए । तर १०१ औँ मिनेटमा चेल्सीले पेनाल्टी पायो । जसमा जोर्गिन्होले गोल गरेर खेल बराबरीमा ल्याए । त्यसपछि भएको टाइब्रेकरमा चेल्सीका ट्यामी चुके र उपाधि लिभरपुलको पोल्टामा गयो ।